थियम्स एच।, एडिस स्प्रिपरको विधेयकको सजायका लागि विधेयक अघिल्लो कैबिनेटमा खारेज गरिएको छ, सबैलाई सम्बोधन गरिनेछ: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
मानिसहरू अझै तयार थिएनन्। One यस साइटबाट एक फिर्ती अघिल्लो रूट कैबिनेट अन्तर्गत एडिथ शिपर्सको बिरुद्ध 5,000 देखि अधिक हस्ताक्षरहरू जिते। सारांशमा, त्यो बिलले तपाईंको अर्थ, साथी, छिमेकी वा परिवारलाई यति धेरै अर्थ दिन्छ मनोवैज्ञानिक फोन गर्न को लागी ध्यान दिनु पर्छ कि तपाईं अलगाव कक्ष मा अवलोकन को लागि फेंक सकते हो। तपाइँ यसलाई फेरि पढ्न सक्नुहुन्छ। थिज एच (हत्याको पछि हामी केवल 1 गवाह त्यसो भए उनीहरुका अनुसार उनीहरुका अनुसार उनीहरुका अनुसार उनीहरुका अनुसार उनीहरु आफुले आफुलाई बिहे गरेकी थिईनन। उनीहरु आफुलाई बिहे गर्न लागेकी छिन्।
के थियो त्यो बिल त्यसपछि? एउटा अवलोकन लिनुहोस्:
एक अवलोकन उपाय सम्भव कसैले3दिन पालन गर्न गर्नेछ - मामला अध्ययन गरिरहेको र गर्दा र परिवार / नातेदार परामर्श - र यदि त्यो एक गम्भीर मानसिक विकार छ कि एक धेरै बलियो शङ्काको छ त्यहाँ जसबाट endangering एक शङ्काको छ व्यक्ति आफै वा उनको वातावरण। यस तरिका, खतराको गम्भीरता निर्धारण गर्न सकिन्छ र यदि आवश्यक भएमा एक संकटको उपाय लिन सकिन्छ वा एक फरक प्रकारको सहायता तैनात गर्न सकिन्छ। अवलोकन अवलोकन मा अझै सम्म कुनै उपचार छैन।
यसको अतिरिक्त, यो अधिनियमले यो सम्भव बनाउँछ कि अनिवार्य हेरचाह 18 घण्टाको संकटको माप भन्दा पहिले प्रदान गर्न सकिन्छ। यो चिन्ताका घटनाहरू जसमा यो उचित रूपमा निश्चित छ कि एक संकटको माप लिइनेछ, तर जहाँ उपायले आफैलाई अझै समय लाग्छ। यो मापको प्रत्याशाको प्रत्याशामा, यसले उनीहरूको स्वतन्त्रतामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रतिबन्धित गर्न वा यसलाई शान्त पार्न दुर्व्यवहार गर्न आवश्यक छ र फेरि स्थिति व्यवस्थित गर्न आवश्यक हुन सक्छ।
"यो राम्रो छ, किनकि हामी यो प्रकारको हत्या थिय्स एच जस्तै प्रकारको नहीं चाहियौं र सबैले अझै पनि अनफिर्नी सम्झाउँछन् (र बेल्जियम जुली वान एस्पेनको हत्या बिर्सन नदिने)"। विशेष गरी मार्टिन व्रिजल्याण्डलाई विश्वास नगर्नुहोस्। त्यो पागल साजिश विचारकले तपाईंलाई स्वीकार गर्ने प्रयास गर्दछ कि तपाईं PsyOps (मनोवैज्ञानिक अपरेसन) संग खेल्न सकिन्छ समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान अधिकतम। यसको मतलब यो छ कि तपाईं मिडिया मार्फत ठूलो सामाजिक प्रभावको (स्थगित) समस्या बेच्नुहुन्छ। यसको लागि, प्रयोग गरी दुवै प्राविधिक साधन र समझौता व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण शस्त्रागार बनाइयो, तर (र सम्भवतः विशेष गरी) गहिरो नक्कली क्यारेक्टरहरू (भिडियो प्रमाण सहित) सिर्जना गरियो।
अनी फेफेरको मामला पछि टीबीएस विधान संशोधन गरिएको छ केहि सच्चा हेरचाह हुनेछ; जब सम्म हामी यो थाहा पाउँदैनौं कि हामीले सोभियत युनियन अन्तर्गत विद्रोहीहरूसँग के भयो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेका हुन सक्छौं; रगतमा सफा गर्ने शासनका विरोधीहरू। अब तपाईं शासनको विरोध नहुन सक्नुहुन्न, तर केवल पर्खाइमा निश्चित नभएसम्म तपाईं विचाराधीन नभएसम्म निश्चित अभिभावक वा (निकट भविष्यमा) अनिवार्य मुद्दाहरू जस्तै टीकाकरणको लागि फर्कनुहोस्।
मेरो संदेह यो हो कि थिजी एच समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान अधिकतम रूपमा त्यसपछि अझै पनि परिचय एडिथ शिपर्स विधानको स्वीकृतिको लागि तयार हुनुपर्दछ। उल्लेख गरिएको छ कि थिजी जीजीजे क्लिनिकमा उपचार भइरहेको छ। मेरो शब्दहरू चिन्ह लगाउनुहोस् त्यस पछि यो पाइन्छ कि यदि छिमेकीहरू वा परिचितहरूले मनोचिकित्सालाई बुझेका थिए, यो सबै रोकिएको हुन सक्छ। यसको लागि हामीले केवल केहि नेइसेकिउुर, DWDD, Pauw र Jinek छलफलका लागि मात्र प्रतीक्षा गर्नुपर्छ र मानिसहरू 'विशेषज्ञहरू' द्वारा स्वीकृति मोडमा ल्याइएका छन्। तपाईंले ध्यान दिनुभएन कि यस कानूनले सबैलाई असर गर्न सक्छ र मनोवैज्ञानिक सेवाले धेरै मानिसलाई ग्यागग गर्न सक्दछ (न्यायाधीश वा मनोचिकित्सकको हस्तक्षेप बिना)। यदि तपाईं धेरै ढिलो हुनुहुन्छ भने तपाईले अझ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। The नर्सहरू पहिले नै प्रशिक्षणमा छन्। ओह ठीक छ, तपाईं सम्भवतः एक विद्रोह होइन।
ट्याग: एडिथ, विशेष, GGZ, एच। हत्या, साना कुकुरहरू, क्लिनिक, हत्यारे, नयाँ, समस्या, मनोवैज्ञानिक, प्रतिक्रिया, Schippers, समाधान, Thijs, walkers, भिजेको, कानून, बिल
9 मई 2019 मा 21: 23
हां, त्यसपछि पीटर आर डी वेल्स पनि सही छ, डे ड्वाङ्गबुis: तपाईंलाई सम्झना छ
के तपाइँसँग फरक विचार छ ??? : "त्यसोभए तपाईं एक स्ट्रेटज्याकेटमा लिन सक्नुहुन्छ"
खतरनाक ट्याब्लेट कला
अब सबैलाई थाहा छ कि Wim Dankbaar वैट्रा कथा (वास्तव में Psyopp) को बनाए राखन छ, तर उनले पीटर संग काम गरे कि पहिलो चाल दिन को लागि।
यद्यपि विम "शून्य" psyopp भएको थियो यदि Wim लाई शर्मिष हुनुपर्छ।
र त्यसपछि त्यो सजिलै सुचारु भनिँदैन, चाहे wimmetje सही छ वा छैन
9 मई 2019 मा 22: 14
"नर्सहरू पहिले नै प्रशिक्षणमा छन्।"
हाहा, उल्लसित। पहेली को टुक्रा वास्तव मा एक साथ गिरते खूबसूरती देखि।
10 मई 2019 मा 06: 55
तपाईं कसरी स्पष्ट रूपले कम्पनीको सूची र धोखाधडी एडिथ शिपर्स कानुनको दिशामा धक्कासँग सञ्चालन गर्न चाहानुहुन्छ?
10 मई 2019 मा 19: 17
Thijs ... स्वैच्छिक एक बंद वार्ड मा हिंड्छ र पछि भाग्न कोसिस गर्दछ?
10 मई 2019 मा 21: 19
यो तुरुन्तै मलाई मारा, एकपटक तपाईंले बुझ्नुभएपछि यो कसरी काम गर्दछ, यो स्पष्ट छ कि यो कसरी खेलाएको छ।
तपाईं पनि महसुस गर्नुहुन्छ कि केहि प्रकारका समाचारहरू यो गलत छ भने, यदि तपाईं कम्तिमा जागृत हुनुहुन्छ।
यो पनि लाग््छ कि तिनीहरू पनि यो विश्वसनीय बनाउन प्रयास गर्दै छैनन्।
जस्तो कि तिनीहरू छवि सिर्जना गर्न खोज्दैछन् जुन त्यहाँ सबै क्रमिक पागल धारावाहिक हत्याराहरू छन् ... जो मान्छेलाई मात्र मार्छन् ...
11 मई 2019 मा 08: 19
कन्फिगरेटेड नीदरल्याण्डको अखबार
11 मई 2019 मा 11: 48
र हामी भर्खरै र मा स्पिन गर्दछौ, ताकि एडिथ शिपरको कानून हासिल गर्न सकिन्छ
11 मई 2019 मा 11: 56
र हामी यो एक अतिरिक्त नाटक सस दिन्छ, ताकि गुआग मा धेरै मुद्रा निवेश गर्न सकिन्छ:
11 मई 2019 मा 19: 40
बस गर्नुहोस्, त्यसोभए तपाईं पर्याप्त भ्रामक हुनेछ।
विचारकर्ताहरू, आलोचकहरू, बाहिरका बक्स विचारकर्ताहरू आज तपाईले आजकल उलम्बन गर्नुहुनेछ।
सम्पूर्ण देशको रापिवादी / हत्याराहरु, मनोविज्ञान र आतंकवादको सम्भावित श्रृंखलाले बाढीलाई सहयोग पुर्याउनेछ! भर्खरैका वर्षहरूमा, नेदरल्यान्डमा धेरै परिवर्तन भएको छ, वा स्पेसलाइटलाई अहिलेसम्म थिएन। हामी खतरनाक देशमा के गर्छौं? कुनै पनि समय, केहि हुन सक्छ। तर ग्यायफाइड वा राजाको दिनमा त्यहाँ एक अपवाद छ, हत्याराहरू, राप्परहरू पनि खुसी र असाध्यै उत्साहित छन्।
« अर्को स्तर सुरक्षा नेट: कैफे वेल्स्चेमरज (पेटिङ्गको ढाँचा) मार्फत पैट्रिक सावेल साजिश कोर्स
यो वेबसाइट अनप्लग गर्न समय? अद्यतन 15-05-2019 »
कुल भ्रमण: 12.384.041
कारेल रेउटर op डर्क वाइर्समाको हत्याको बारेमा के सत्य छ र त्यो 'मुकुट गवाह' को अर्थ के हो?
सीजर शेर कैफे op के अब अमेरिका र इरानको बीचमा छिट्टै युद्ध हुने छ?